ECHO Web (Internetka ECHO) | ECHO Minnesota
» ECHO Web (Internetka ECHO)
Waxa ku taxluuqa Internetka
Asal ahaan suuqa la soo galiyay 2005, ECHO Web (Internetka ECHO) waxa ay ilaha ku bixisaa maktabadda internetka caafimaadka, tabaabushada deg-degga iyo hawlaha bulshada.
Iyadoo la kaashanayo qalabka maqalka iyo fiidiyaha iyo maqalka qoraalka ee lagu helayo illaa 70 mowduucyo, lagula xiirayo si istcmaalayaasha lagu caawiyo ilaha iyo macluumaad bil kasta lagu soo daray. Internentka ECHO waxa ay leedahay meel dhexe oo ay isugu yijmaadnaa, shaqaalaha ololaha iyo xubanaha jaaliyadda ee raadinayo waxbarashada luqadaha badan ee caafimaadka, ammaanka, deg-degga iyo hawlaha bulshada.
Inta lagu jiro xaaladda deg-degga ah, ECHO WEB (Internetka ECHO) waxa ay bixin doontaa macluumaadka markaas socda, ay ka mid yihiiin tusmooyinka rasmiga iyo xaaladaha ugu dambeeyey. Internetka isaga qor maantay si aad ku heshid ogaysiiska deg-degga ah.
Halkaan riix si aad ku heshid darsin macaalumaad ee mowduucyada caafimaadka, ammaanka iyo hawlaha bulshada.
Halkaan riix si aad u hesho ilaha kaa caawinaya adiga iyo reerkaaga si aad u ahaataan kuwo caafimaad qaba, ammaan haysta iyo isdiyaariyay.
Halkaan riix si lagu ECHO ilaheeda loogu talagalay in ay haydaha shacabka ka caawiyaan caafimaadka iyo ammaanka, ururrada samafalka iyo kuwa jaaliyadaha ajnabiga iyo kuwo kale ee u adeegaya shacabka ee aan af ingiriisi macna leh ku hadlin.